ဗြိတိန်မှာ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး lockdown လုပ်မှု အလွန်နောက်ကျခဲ့ပြီလား?
လူတစ်သန်းခန့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းက သတိပေးပါတယ်။
ဗြိတိန်အစိုးရဟာ COVID-19 ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး တစ်နိုင်ငံလုံး အသွားအလာ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ကာ lockdown လုပ်မှု အလွန်နောက်ကျခဲ့ဖွယ်ရှိပြီး လာမယ့် သီတင်းပတ်အရောက်မှာ လူတစ်သန်းခန့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
(ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်) (Photo: Andrew Parsons/10 Downing Stree)
ဗြိတိန်မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး စီမံဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် သုံးပတ်ကြာ အသွားအလာ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ပြီး lockdown လုပ်ထားမယ်လို့ တနင်္လာနေ့ (မတ်လ ၂၃ ရက်) ညနေပိုင်းမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မိန့်အရ ဗြိတိန်ပြည်သူတွေကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်နဲ့ မရှိမဖြစ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက်သာ နေအိမ်ပြင်ပ သွားလာခွင့်ပြုကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်အစိုးရက ယခု စီမံဆောင်ရွက်မှုဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို နှေးကွေးစေမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ခြောက်နှစ်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့သူ ဂျရီမီဟန့်ကတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်ရန် လူတွေကို အနီးကပ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ခပ်ခွာခွာဖြစ်နေစေရန် စီမံဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်း အောက်လွှတ်တော် (House of Commons) မှာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဂျရီမီဟန့်) (Photo: Politico Europe)
ထိုနေ့က ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေး အသွားအလာ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မှုအသစ်တွေကို ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ကြေညာခ့ပြီးနောက် မကြာမီမှာပင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဂျရီမီဟန့်က ထိုသို့ သတိပေးပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု စီမံဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ဗြိတိန်ကို အီတလီကဲ့သို့အဖြစ်မျိုး မကြုံစေရန် ကာကွယ်တားဆီးရန် အလွန်နောက်ကျခဲ့ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျရီမီဟန့်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့အတူ ဆေးရုံမတက်ရသူတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှု မလုပ်ဆောင်ရန် ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ပြန်ပြင်သင့်ကြောင်းနဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ စင်ကာပူ အပါအဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ဥပမာအတိုင်း လိုက်လုပ်သင့်ကြောင်းလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းက ဆိုပါတယ်။
(Photo: Tom Wren SWNS)
ထိုနိုင်ငံများမှာ ပြင်းထန်တင်းကျပ်တဲ့ အစီအစဥ်များချမှတ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိ လူပေါင်းများစွာကို ဗြိတိန်မှာထက် ပိုမိုစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံလူနာတွေကိုလည်း သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ ၎င်းနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူတွေကို ရှာဖွေခြင်းကိုလည်း ဗြိတိန်ထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း ဂျရီမီဟန့်က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
"ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်တုန်းက ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွှန်မှုတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး လူတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးတာကို ရပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်မှာလဲဆိုတာ မသိရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ? ခန့်မှန်းခြေတွက်ချက်မှုပုံစံတွေအရဆို ဒီနိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပြီးသူ ၃၀၀,၀၀၀ အောက်မှာရှိနေတယ်" လို့ ဂျရီမီဟန့်က မတ်လ ၂၃ ရက်မှာ ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ၂၈၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၁,၀၀၀ မှာ ၁ ယောက် သေဆုံးမှုနှုန်းကို အခြေခံတွက်ချက်မှုအရ ကူးစက်ခံရသူဦးရေကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းက ကောက်နုတ်ပြောခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
"အဲဒီတွက်ချက်မှုပုံစံအရ ငါးရက်မှာ ကူးစက်ခံရသူ ၂ ဆတိုးပါတယ်၊ ဒါဆိုရင် လာမယ့် သီတင်းပတ်ကုန်ကျရင် ဒီနိုင်ငံမှာ လူတစ်သန်း ဒါမှမဟုတ် အဲဒီထက်ပိုတဲ့ အရေအတွက်က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရမျိုး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးတဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံကို မပြောင်းဘဲနဲ့တော့ အဲဒီ ကူးစက်ခံရသူတစ်သန်းက ဘယ်မှာလဲဆိုတာ သိလာမှာမဟုတ်ဘူး" လို့ ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဂျရီမီဟန့်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
(ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံတဲ့ ချားလ်စ်မင်းသား) (Photo: Getty Images)
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပြင်းထန်တင်းကျပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုနည်းဗျူဟာက လက်ရှိအချိန်မှာ များစွာအောင်မြင်ပုံရတယ်လို့လည်း ၎င်းက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်စပ်သတင်းတစ်ရပ်အရ ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုဝင် ချားလ်စ်မင်းသားထံမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ချားလ်စ်မင်းသားဟာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ တော်ဝင်မိသားစုဝင်တာဝန်တွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့စဥ် များပြားတဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့မှုများရှိခဲ့ရာမှ ၎င်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သူတိုင်းကို အတိအကျ စစ်ဆေးမှုတွေများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။